Vaovao - Ireo mpivarotra siansa dia mifanakalo hevitra momba ny tombony azo avy amin'ny fikarohana keyword FBA
Ireo mpivarotra siansa dia mifanakalo hevitra momba ny tombony azo avy amin'ny fikarohana keyword FBA
Las Vegas, 9 Jona 2021 (Global News Agency) -Ny Seller Scientific tao Las Vegas, Nevada dia niresaka momba ny teny lakile sy ny tombotsoan'ny fikarohana teny lakile ho an'ny fahatanterahan'ny mpivarotra Amazon. Vao haingana ny orinasa dia nanambara ny fanombohana ny fitaovana keyword FBA an'ny Amazon, izay natao ho an'ny olona mivarotra amin'ny Amazon.
Ny solontenan'ilay orinasa, Robert MacDonald, dia nilaza hoe: “Ny fikarohana ny teny lakile dia zava-dehibe amin'ny indostria rehetra, na mivarotra vokatra izany na manana tranokala misy fampahalalana fotsiny. Mba hampitsidihana ny olona ny tranonkala dia ampiasaina ny teny lakile, ary raha te hahalala izay teny fanalahidy mety dia ilaina ny fikarohana. ”
Nilaza i MacDonald fa hikaroka an'i Amazon amin'ny fotoana tena izy ny fitaovan'ny orinasa ary hanome ny teny lakile farany sy mifandraika indrindra. Nilaza izy fa ny fitaovan'ny orinasa dia manome ny mombamomba ny teny lakile tena marina ary maimaimpoana ho an'ireo mpivarotra FBA. Nanampy izy fa ny fikarohana teny lakile, indrindra amin'ny indostria mifaninana be toy ny fivarotana amin'ny Amazon, dia zava-dehibe amin'ny mpivarotra hijanona eo alohan'ny fifaninanana.
MacDonald dia nilaza hoe: "Ny fiakarana kely amin'ny taham-pibebahan'ny olona iray dia mety hidika ho fahasamihafana lehibe eo amin'ny fitanisana ny laharana voalohany ao amin'ny Google noho io teny fanalahidy manokana io na ny fikorontanan-tsaina." “Izay rehetra ao amin'ity orinasa ity. Tokony ho mailo ny rehetra fa tsy maintsy milahatra amin'ny pejy voalohany izy ireo. Raha ny marina dia tsara laharana kokoa izy ireo mandritra ny pejy voalohany, ary toy izao no anaovan'ny teny lakile. ”
Nilaza i MacDonald fa ny orinasa rehetra izay tsy hita amin'ny pejy voalohany na roa amin'ny motera fikarohana dia mety tsy ho hitan'ny ankamaroan'ny karoka. Ny fanadihadiana dia naneho fa ny ankamaroan'ny mpanjifa dia mizaha ny pejy roa ka hatramin'ny telo voalohany an'ny Google rehefa mitady vokatra na serivisy manokana, noho izany dia zava-dehibe ny filaharana ambony amin'ny teny lakile manokana. Nanampy i MacDonald fa ny keyword keyword an'ny orinasa maimaimpoana dia afaka manampy ny orinasa hahatratra ireo isa tadiavina ireo.
"Na iza na iza nanao karazana marketing an-tserasera dia hahafantatra fa tena ilaina ny mahatratra ireo pejy voalohany," hoy izy nanampy. "Novolavolainay ho an'ny mpivarotra Amazon ity fitaovana ity mba hanampiana azy ireo hanome laharana ny vokatra manokana amidiny. Ny teny lakile mety dia handray anjara lehibe amin'ny fanatratrarana ireo toerana ambony irina ary hanampy ireo mpivarotra ireo hahatratra ny mpihaino tadiaviny. vokany. ”
Nilaza i MacDonald fa izay rehetra manana fanontaniana na maniry fampahalalana bebe kokoa dia afaka mitsidika ilay orinasa an-tserasera hahafantatra momba ny famotehana tanteraka ny fitaovana sy ny fomba fiasany. Nanampy izy fa ny fitaovana dia manome fanovana kely ho an'ny mpivarotra, saingy ireo fiovana ireo dia mety hamokatra valiny lehibe amin'ny Amazon.
Nilaza izy fa ny fitaovana dia natao hanehoana ny teny lakilen'i Amazon ihany, noho izany dia miasa tanteraka amin'ny mpivarotra Amazon. Toy ny fitaovana hafa, ny fitaovan'ny Mpivarotra siantifika dia tsy mampiseho lisitra lehibe misy ifandraisany amin'ny teny toa ny fitaovana hafa, fa kosa mampiseho teny lakile manokana ho an'ny mpividy Amazon, amin'izay ny mpivarotra dia afaka misafidy mora kokoa izay ilainy hampiasa Keywords.
Nilaza i MacDonald fa raha ny tena izy, ny fitaovana dia manome ny mpivarotra fomba iray hampitomboana ny orinasany amin'ny fampitomboana ny varotra, satria tsy ny rehetra no hanome isa ny teny lakile rehetra mifandraika amin'izany. Noho io antony io dia nanambara i MacDonald fa ny mpivarotra dia tsy maintsy manana fitaovana teny fanalahidy natao hiasa amin'ny orinasany manokana, ary mampiasa ilay fitaovana izy ireo hisafidianana teny lakile ahafahany mampiroborobo ny orinasany.
Ireo izay liana dia afaka mamaky ny fanambaràn'ny orinasa teo aloha tao amin'ny tranokalam-baovao Press Advantage na mitsidika ny tranokala ofisialy hianarany bebe kokoa momba ny fitaovam-pikarohana fikarohana natao ho an'ny mpivarotra Amazon. Ny orinasa dia afaka mifandray amin'ny alàlan'ny pejiny Facebook ofisialy na amin'ny alàlan'ny telefaona na mailaka mivantana. Ireo izay liana dia afaka mahita fampahalalana momba ny fifandraisana sy ny fampahalalana momba ny tranokalam-pifandraisana rehetra ao amin'ny tranonkala ofisialiny.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny Scientific Seller, azafady mifandraisa amin'ny orinasa eto: Scientific SellerRobert MacDonaldsupport@s Scientificseller.comPO Box 29502 # 84699Las Vegas, NV 89126
Instagram "dia tsy fampiharana fizarana sary intsony", ny tompon'andraikitra Adam Mosseri dia nanaiky fa ny Facebook Inc (NASDAQ: FB) dia niara-niasa tamin'ny TikTok sy Alphabet Inc (NASDAQ: GOOG) tao anaty clip video fohy. (Nasdaq: GOOGL) Tao amin'ny clip video fohy tao amin'ny YouTube, ny Financial Times dia nanaiky fa nanao tatitra. Ny zava-nitranga: Niaiky i Mosseri fa mitombo ny lanjan'ny horonan-tsary amin'ny familiana sehatra an-tserasera ary nitady hitandrina bebe kokoa amin'ny media izy. Ny mpandalina dia naneho ny ahiahiny momba ny fiovan'ny motera fitomboana lehibe indrindra amin'ny Facebook, izay mety hanimba ny Instagram
Ireo hatsikana malaza “Heveriko fa tokony hiala ianareo” ary ny “Tsy hiverina intsony” aho ary miomana amin'ny “Tompon'izao rehetra izao” an'i Kevin Smith sy ilay bibikely hafahafa “Biby mahatsikaiky”
Nilaza ny orinasa tamin'ny Alakamisy fa nanomboka nampitandrina ireo mpampiasa sasany ny Facebook Inc fa mety nahita “votoaty mahery fihetsika” tao amin'ny tranonkalan'ny tambajotra sosialy. Pikantsary nozaraina tao amin'ny Twitter dia mampiseho fampandrenesana manontany hoe “Manahy ve ianao sao lasa mahery setra ny olona iray fantatrao?” Mampitandrina ireo mpampiasa ny iray hafa fa: "Mety ho tratry ny votoaty mahery setra mampidi-doza ianao tato ho ato." Tambajotram-pifandraisana sosialy lehibe indrindra eto an-tany Efa ela no noteren'ny mpanao lalàna sy ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona hiady amin'ny ekstremista amin'ny sehatra misy azy, anisan'izany ny fandraisana anjara amin'ny fampielezan-kevitra amerikana an-trano amin'ny korontana ao Capitol tamin'ny 6 Janoary, raha nanandrana nijanona ny vondrona manohana ny filoha teo aloha Donald Trump ny Kongresy amerikana dia manaporofo fa nandresy tamin'ny fifidianana ankapobeny tamin'ny volana novambra i Joe Biden.
Araka ny tatitra vaovao iray avy amin'ny GamesBeat, mpamorona "Star Wars: Squadron" EA Motive dia mamerina ny andian-tantara mahatsiravina velona "Dead Space".
Ny studio lalao Singularity 6 monina any Los Angeles dia nanangona vola bebe kokoa satria manitatra izy ary miomana ny handefa ny lalao voalohany. Ny fanombohana dia nilaza tamin'ny TechCrunch fa nanangona $ 30 tapitrisa tamin'ny fihodinana Series B notarihin'i FunPlus Ventures izy ireo, niaraka tamin'i Andreessen Horowitz (a16z), LVP, Transcend, Anthos Capital, ary Mitch Lasky. Ny studio izao dia nanambara famatsiam-bola mitentina 49 tapitrisa dolara, izay vola be, saingy mampiseho ny isan'ny mpampiasa vola manantena ny hamory vahoaka manodidina ny lalao lalao aorian'ny IPO an'ny Roblox.
Ny sehatra fizarana sary dia mikasa ny handrara ny fampiasana fiteny na sary manintona na manambany karazan'olona sasany.
Ilay kintan'ny boaty ambony dia te-hahazo ny mari-pankasitrahana “Zoma” avy amin'i Warner Bros. ary niampanga ny studio ho fahatarana be loatra sy fitsaboana tsy mendrika. Nilaza i Warner fa ny gilasy no olana.
Fampianarana momba ny fitantanana orinasa ambony, taranja manokana 7 manara-maso ny fitantanana, marketing nomerika ary ny loharanon'olombelona, ​​sns. Vita haingana sy tamim-pahombiazana tao anatin'ny 8 volana, ahafahanao mahazo ny lamaody anglisy.
Ny Warner Bros. Studio any Leavesden, UK (WBSL) dia nanitatra ny toerana nampiasainy tamin'ny alàlan'ny fampidirana feon-kira vaovao telo sy sehatra famokarana virtoaly, V Stage. Ny prequel an'ny “Game of Thrones” an'ny HBO dia ny “Dragon House” izay namboarina voalohany mba hampiasa ilay toerana vaovao. Ankoatra ny[...]
Nanazava ny seho iray nampiady hevitra ilay talen-tsehatra izay nitantara ny kintana fihetsika asongadina tamin'ny sarimihetsika natolony ny sary tsara indrindra tamin'ny sary hoe "Indray mandeha any Hollywood".
Taorian'ny volana maro tamin'ny sivana mahery vaika, blitz fampielezan-kevitra, ary fanangonana andiana horonantsary tia tanindrazana, fandaharana amin'ny fahitalavitra ary mozika, nankalaza ny faha-100 taonany ny Alakamisy ny Antoko Kaominista any Sina. Ahitana kabary politika, fahatsiarovana faobe nalamina tsara tao amin'ny Kianja Tiananmen, ary ny chauvinisme […]
Ny HKMA dia miara-mandrindra taranja 8 MBA miaraka amin'ny oniversite malaza 5 ary miasa miaraka ao Hong Kong, manome specialities isan-karazany, ao anatin'izany ny fitantanana orinasa, marketing, fitantanana ara-bola ary ny loharanon'olombelona. 1.5 taona hamaranana, misoratra anarana avy hatrany ho an'ny lahateny fampianarana maimaimpoana.
Ny sarimihetsika vaovao nataon'i Chris Pratt dia mifantoka amin'ny ady futuristic amin'ireo mpanohitra vahiny, fa ny mahasarika azy dia ny olombelona. Ao amin'ny "Ady rahampitso", Pratt milalao ny miaramila teo aloha Dan Forester, izay nandeha tamin'ny 2051 mba hamonjy ny ho avin'ny zanany vavy ary tafiditra amin'ny ady resy eo amin'ny olombelona sy ny mpanafika mpandatsa-dra. “Raha azonao atao ny mametraka ny tantara an-tsehatra amin'ny hoe fiainana mahafinaritra ity 'hatramin'ny…
Ny mpanjaka nandefa horonantsary dia nanalavitra izany ho an'ny taloha, saingy mivoatra haingana ny indostria.
Tsy misy fahasimbana, antoka feno! Aza manome antoka voalohany! Ny politikam-piantohana dia mihatra amin'ny fiarovana 1 [Global Super Power].
Ity fihetsika ity dia mampiseho fa ny tsy fahampian'ny puce dia hisy fiantraikany lehibe amin'ny indostria aorian'ny telovolana faharoa. Ny mpitantana indostrian'ny fiara sasany dia nilaza fa ity vanim-potoana ity dia hanamarika ny vanim-potoana matotra indrindra amin'ny olana eo amin'ny famatsiana.
Ny nofy dia toerana ahafahanao milalao sy miaina ny nofinofin'ny Media Molecule sy ny fiarahamonina misy azy. Ity koa dia toerana iray hamoronana ny nofinao manokana, na lalao, kanto, sarimihetsika, mozika na zavatra hafa eo anelanelany.
Fahazoan-dàlana sy fandaharam-potoana nohavaozina. Nilaza ny orinasa fa ny tambajotra vaovao multicast EW Scripps roa natomboka androany, TrueReal sy Defy TV, dia nofongorana tao amin'ny 92% amin'ireo tokantrano amerikana. Ho fanampin'ny fandrakofana ny tambajotra dia nanambara koa ny antsipirian'ny programa i Scripps. Defy TV dia hifantoka amin'ireo lehilahy 25 ka hatramin'ny 54 taona ary hanome […]